Material: Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 201/304/316, Bonke ubude ziyafumaneka ngesicelo sakho
Izihlanganisi ze-Powerlink crimp zokwenza i-run (conductor) kwaye ucofe (umqhubi) ngokudibanisa ezimbini zokuqhuba ezihamba ngaphezulu kunye nezicelo ezingaphantsi komhlaba. Ukubonelela ngokuqhuba okuphezulu kunye nokunciphisa ukubola. Kufanelekile kuzo zonke iintlobo zemozulu / ufakelo olungeyongozi.
Sahlulahlula isixhobo se-bolt
Ikhampasi edibanisa uqinisa
Ubhedu, Brass, kunye nesingxobo sobhedu
I-99.95% yobhedu olucocekileyo kunye ne-Q235 yentsimbi ephantsi yekhabhoni
Uluhlu lobhedu copper0.254 microns
tensile≥570N / mm²
Uqinisa of emhlabeni intonga
I-T-clamp isetyenziselwa ikakhulu amandla emigca yamandla okanye izitishi ezitshintshiweyo, apho ibarbar ikhokelela kwisebe langoku ngendlela emise uT. okanye ubambe isinxibelelanisi se-oval njengohlobo lohlobo lwe-T
Imveliso yenziwe ngamandla aphezulu e-aluminium anti-corrosive alloy ukukhusela ukubekwa kweentambo.Isakhiwo sokulungiswa sinamathele ngebholiti.Ukugcina ikliphu kuhambelana, kunengqiqo ekuvumelaneni, kulula kwaye kuguquguqukayo ukufakela kwaye akwenzi okubi intambo.